Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseDashi I-Robin van Persie Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; 'Ukuhamba ngeDutchman'. I-Robin van Persie Childhood Story kanye ne-Biography Fact ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokuzalwa kuze kube yilapho. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kwegama, ubuhlobo bomshado, impilo yomndeni, kanye namaqiniso amaningi angaziwa nge-OFF-Pitch.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngomlando wakhe we-Premier League kodwa abambalwa abheka i-biography kaRobin van Persie. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
URobin van Persie wazalelwa ngosuku lwe-6th ka-Agasti 1983 eRotterdam, eNetherlands. Wazalwa nonina, uJosé Ras van Persie nobaba, uBob van Persie. Bobabili abazali bahlukanisile ngenkathi eseyingane encane.
URobin uvela emndenini wobuciko. UJosé Ras, unina, ungumdwebi nomdwebi wezinhlobonhlobo. Ubuye ufundise izingane ezidinga izidingo ezikhethekile. UBob, uyise, ungumdwebi ochwephezayo.
Ngesikhathi ekhula eRotterdam, uVan Persie wayaziwa ngokuthi "ingane enenkinga wAkuthandi lutho ngaphandle kwebhola". Ngemuva kokuhlukana kwabazali bakaVan Persie, wakhuliswa nguyise.
Esikoleni, uVan Persie wayengomunye wabantwana abangenangqondo kakhulu. Wayengekho esikoleni cishe nsuku zonke. Eqinisweni, wayengakaze abe uhlobo lokufunda. Othisha bakhe babelokhu bemtshela ...: "Robin, yenza umsebenzi wesikole, kubalulekile ukuthi ube nediploma yakho". Nokho, URobin osemncane walalela amanye amazwi avela kubalandeli bakhe athi ..."Uzofana noJohan Cruyff". Lokhu kwashiya othisha bakhe badabukile isimo sengqondo esibonisa ukungajabuli okuphelele kubantu abafundisayo.
Ubaba wakhe akazange azikhathaze ngokuziphatha kwengane yakhe. Sitshela ukuthi kungani !. URob van Persie wayazi ukuthi ibhola lakhe libiza kanjani ngaphambi kokuzalwa kwakhe. Uthe, "Ngisho wena haabafundi bezemfundo, ikusasa lakhe lalizogcwaliseka. "
URobin wayegcinwe ngaphandle kwenkinga engaphezu kwalokho engangena ngenxa yothando lwakhe lwebhola. Kusukela ku-1997 kuya ku-1999, wadlala i-Excelsior njengomusha. Ifilosofi ka-Excelsior kwakuwukuvuselela ibhola lomgwaqo. Bavumela izingane ukuba zidlale ngaphandle kokuphazanyiswa okuningi
Iqembu elihlanganisa abaqeqeshi basebenze kanzima emanzini onyawo likaVan Persie futhi behamba phambili. Ukuthuthukisa amakhono adingekayo ukudlala ezitaladini zase Kralingen, indawo enamasiko amaningi empumalanga yeRotterdam lapho akhula nalapho uyise ehlala khona.
URobin wayethandwa kakhulu eqenjini njengoba evuka ezingeni eliphezulu lezingane. I-Excelsior ibhodi labaqondisi kwakudingeka ibeke i-stand ngemva kwakhe emdlalweni we-3,500-capacity Stadium, eWoudestein e-Rotterdam.
Esinye sezimpahla zika-Excelsior sabizwa ngo-Robin van Persie
Kusukela ku-11 ubudala, uRobin wayekhulile esekela u-Arsenal ngenxa yokuthi ubaba wakhe ungumdlali we-Arsenal onzima. Ngezansi isithombe sakhe.
URobin van Persie, umsekeli we-Arsenal ku-JVC Era
Lapho eneminyaka engu-13, uVan Persie ubanjwe ngesiteleka ezweni lakubo ababukele beqhubeka bemfanisa neHergen legendari uJohan Cruyff. Lokhu kwaletha uthando olwengeziwe lomdlalo njengoba eqoshiwe izinwele zakhe ukuze zibukeke njengebhola.
URobin osemncintiswaneni udonsa izinwele zakhe ebhola
UDutchman onethalente wajoyina iqembu elikhulu le-Holland Feyenoord eneminyaka engu-13 ukuze alandele iphupho lakhe, kodwa waba yisitha sakhe esibi kakhulu. Imisebenzi yakhe ensimini yayingekho enkulu. Ngaphezu kwalokho, ukuziqhenya kwakhe nokuziqhenya kwakhe kwamthuna ikhono lakhe. Ngenkathi uVan Persie ephenduka i-20, u-Feyenoord wamlahla.
Ngemva kokushiya leli qembu, uRobin waqhubeka namakhono akhe amakhulu emigwaqweni yaseKralingen ezinkantolo zekhonkolo ezinezicingo eziphezulu ezibizwa ngokuthi 'cage.'
Inhlanhla yakhanyisa ngaye njengoba eqala ukukhetha umdlali we-Arsenal ozoyithatha isikhundla sikaBergkamp ngemuva kokuhamba kwakhe. UVan Persie wanikezwa indima yokuqala yokudlala kanye noHenry njengomdlali wesibili phambili.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
U-Robin van Persie ukhetho lomfazi usabhubhisa abalandeli bakhe abaningi. Njengamanje ushadile nobuhle baseMorocco, uBouchra Elbali.
URobin van Persie nomkakhe-Bouchra Elbali
Lo mbhangqwana unezingane ezimbili ezinhle, indodana ebizwa ngokuthi uShaelel nendodakazi kaDina. Ngaphansi ngezithombe zabo ngamama abo.
UBucra Elbali van Persie nezingane zakhe
Just like U-Anthony Martial futhi UFilie Coutinho, URobin van Persie washada esemncane we-20. Noma kunjalo UBouchra van Persie nomyeni wakhe, inkanyezi yebhola lezinyawo URobin van Persie, babenesiqalo esiyinkimbinkimbi emshadweni wabo ngenxa yokudlwengula (imininingwane ngezansi). Babesanda kushada ngonyaka kuphela ngaleso sikhathi, kanti uBouchra wake wacabanga ukuthi uzoshiya umyeni wakhe omusha. Kodwa-ke, wayibambelela futhi manje lo mbhangqwana usuke usuka enhliziyweni.
Njengoba ebonile umkakhe ungumSulumane, umlobi wezombusazwe wake wabuza uRobin ukuthi lokhu kuye kwaholela ekubeni aguqukele ku-Islam, uVan Persie uthe, ...
"Akulona iqiniso. Angiyena umSulumane, noma umKristu noma umJuda. Ngikhulisiwe ngokukhululekile. Uma ufuna ukuba ngumSulumane kufanele uvele enhliziyweni. Ngingeke ngikwenze nje ukujabulisa umkami. Ukukholelwa kimi kuyisifiso sokuba umuntu omuhle. "
UBouchra van Persie futhi ungumculi futhi uthanda ukucula ngesiDashi.
Uyaziqhenya kakhulu ngomyeni wakhe ngokuqondene nokuphumelela kwakhe ebhola. Ikhasi lakhe le-Twitter ligcwele izikhala ezidumisa umyeni wakhe.
Lapho ese-Arsenal, uBouch waxoxwa yi-Mirror. Uthe, "Uthisha omuhle kufanele akhathazeke ngeqembu, mayelana neqembu, ngakho konke okubandakanya i-Arsenal. Oh, futhi okwamanje, ngiphakanyiswe ukuba 'ngiphambuke umkami'. "
Ekhasini lakhe lephrofayela, uzichaza ngokuthi, "Umama wezingane ezimbili ezinhle nomfazi oziqhenyayo womyeni omangalisayo." UVan Persie uveze ukuthi indodana yakhe ibize ngokuthi 'ubaba' u-Daddy Arsenal phakathi nezinsuku zakhe njengeGunner, okungenzeka kube nezinkinga ngemuva kokushintshela e-United ehlobo eledlule.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -I-Crying Kid
U-Robin van Persie wase-Turkish club uFenerbahce ukhokhele a Manchester United fan, uLouis Diamond, ukuba ahambe e-Istanbul ukuze ahlangabezane naye ngemuva kokuba ividiyo yomsana ekhala ezindabeni zokuphuma kukaDutch kusukela e-Old Trafford yaya egazini. Ngezansi ubufakazi bezithombe.
ULittle Louis Diamond ukhalela uRobin van Persie
Le vidiyo, eqoshwe ngabazali bakaDamond, yaqaphela abalandeli beFenerbahce abaqala umkhankaso woku-inthanethi wokukhulisa i-$ 2000 (£ 1,281) ngoJulayi ukuze uLouis athole ithuba lokuphinde ahlangane nesithombe sakhe.
Isiqeshana sathola indlela eya kumongameli weFenerbahce u-Aziz Yildirim owabe esezimisele ukumema umndeni weDamond eTurkey. Isimemo sikaYildirim samukelwa futhi safika e-Istanbul ngoLwesine kusihlwa ukuba sibingelelwe ngabasebenzi be-TV eFenerbahce. Inhlanhla yamkhanyela futhi njengelungu lebhodi leFenerbahce, u-Ilhan Eksioglu. Ubeka umndeni wakho iholidi lezinsuku eziyisihlanu endaweni evelele eholide e-Antalya.
"Sifuna ukubonga uFenerbahce nomengameli ngokwenza lokhu kwenzeke. Asikwazi ukulinda ukubona URobin van Persie ukudlala, " kusho ubaba kaDamond uSam ngesikhathi efika e-Istanbul.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
URobin van Persie uvela emlandweni womndeni waseDutch ophakathi nendawo ngaphambi kokuba kutholakale izimali zebhola kuye nasemndenini wakhe. Lapha, sikunikeza imininingwane yokuphila komndeni wakhe uqala nobaba wakhe, uROB van Persie.
Ubaba kaRobin van Persie sikaRob van Persie
UTABA: UBOB van Persie uyindoda ekholelwa eziprofethweni. Uthi ngaphambi kokuba uVanes Persie azalwe, umfana okhulume naye wamtshela ukuthi indodana yakhe izoqhubeka yini ukufeza: "Wangitshela ukuthi isikole ngeke simthande kodwa, uma kuziwa emdlalweni, ukuthi uzoba yinkosi noFerrari ensimini. Ukuthi uzoba eqenjini likazwelonke lesiDashi " UBOB uthe ku-a Umbiko we-Manchester Evening News.
UBob van Persie ungumdlali we-Arsenal onzima. Unomdwebo wezithombe zakhe eziqoshiwe ngaphakathi kwe-Emirates Stadium okwenziwe kumagazini ase-Arsenal endala. Bobabili uyise nendodana babonakala besondelene kakhulu.
Indodana-Ubaba-Ubaba-uRobin van Persie noBaba, uRob
UMAMA: UJosé Ras van Persie oboniswe ngezansi ngumama othandekayo weThe Legendary van Persie.
URobin van Persie- José Ras van Persie
Uke wajoyina indodana yakhe ukuba ihlale e-Arsenal. Emagama akhe ..."Uma siya e-Arsenal futhi sihamba enkundleni nayo, kuyamangaza. Njengomama, lokho kungigcwalisa ngokuziqhenya. Kuyinto emangalisayo ngempela. Ngesikhathi umzukulu kaRobin, ubaba wami, esephelile e-Emirates ngosuku lwakhe lokuzalwa (91st) futhi sithatha izithombe ngaphakathi, ngezwa abantu abakhulile ngemuva kwami ​​bathi: 'Siyamthanda uRobin'. Njengomama, angifuni ukufisa into enhle. "
SISTERS: U-Kiki noLilly van Persie bangodade ababili bakaRobin van Persie. Umtshelezi utshele uyise, uRob ukuthi uzoba nezingane ezintathu, amadodakazi amabili okuqala bese eseyindodana. Kwakungu-Kiki noLilly owafika kuqala nangesibili ngaphambi kokuba uRobin eze wesithathu.
Odadewabo bakaRobin van Persie- Kiki noLilly van Persie
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ukudlwengula Ukudlwengula
Nokho, ku-2005, UVan Persie waboshwa ngokusola ngokudlwengula. Lokhu kwenzeke ngemuva kokudansa kwe-nightclub i-pole dancer ethi uhlasele wamdlwengula. URobin van Persie uvume ukungena egumbini lehhotela ne-stripper kodwa wenqaba ukuthi kudlwengulwe.
Lesi sigameko senzeke e-The Tulip Inn e-Rotterdam, kuphela ngamagceke e-200 avela lapho umkakhe uBouchra elele khona. Lesi yisikhathi lapho ehlanganyela khona amaphuzu aphansi kakhulu emisebenzini yakhe.
Lokhu kwakunonyaka wokuqala owakhethwa ukuba abe yingxenye yethimba likazwelonke laseNetherlands. Isigameko sokudlwengula senzeke ngonyaka ngemuva kokushada kwakhe noBouchra e-2004.
Iziphathimandla zaseDashi azithathanga lula izinto. UVan Persie waphonswa ejele amasonto e-2 ngemuva kokugwetshwa. Amashaja alahlwa ngemuva kwalokho lapho iziphathimandla zibona itayitela libonakala livumelana.
Lesi simo cishe sasilahlekisela kokubili Umshado kanye nomsebenzi wakhe, kodwa umfana omubi webhola lebhola ekugcineni wanquma ngokwanele, walungisa isimo sakhe sengqondo ngokuqondene nomkakhe, abadlali beqembu kanye nabaqeqeshi.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ubuntu
URobin van Persie unezici ezilandelayo zobuntu bakhe.
Ukubuthakathaka: Ukukhohliswa, ukungathembeki, Ukuzidla, inkani nokuzimela.
Yikuphi okuthandwa yi-RVP: Indawo yaseshashalazini, ukuthatha amaholide, izinto ezibizayo nokuzijabulisa nabangani
Iyiphi i-RVP ayithandiyo: Ukunganakwa, Ukungathuthuki phambili, ebhekene neqiniso eliyinkimbinkimbi, ukungaphathwa njengenkosi noma indlovukazi.
Isibonelo esihle: Uhamba no-Thierry Henry, uDennis Bergkamp noMarco van Basten njengamanye amathonya amakhulu emsebenzini wakhe.
Ngaphezu kwakho konke, uRobin ungumdlali wezemidlalo ojikelezayo. Ungumdlali wezintambo kanye ne-tennis. Unethalenta ethile etafuleni lethebula. Ungumdlali we-classic Al Pacino gangster movie Scarface.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Ingozi Yokufa Emndenini
Lapho kumenyezelwa ukuthi iVan Persie ishiya ithimba laseLondon ngeNkulumbuso yabo, abaningi banecala lomkakhe ngokuba ngumgcini wegolide.
I-tweet eyodwa kwaba, "Ngifisa ukufa kuwe. Ngiyakuzonda wena, isikhwama sakho. Ngithemba ukuthi wonke umndeni wakho wehla ufile. "
Lesi akuyona okokuqala uRobin ayebhekene nezinsongo zokuhlasela. Phakathi nezinsuku zakhe zobusha, uRobin nomngani wakhe omkhulu, uJorge Acuna bahlaselwa yi-hooligans abavela ku-Ajax. UJorge Acuna uthathwe esibhedlela ngekhanda, entanyeni kanye nokulimala. UVan van Persie wayenenhlanhla ngokuphunyuka ngokushaywa.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Isizathu ngemuva kwesidlaliso sakhe
Ngo-13 NgoJuni 2014, u-Holland wanikela ngokuvikela abalandeli bezwe laseSpain ukuhlukunyezwa kwe-5-1. Ezinsukwini ezilandelwayo, amaphephandaba aphethe isithombe, ezokuxhumana nabantu kanye neziteshi ze-TV kwaba yilokho URobin van Persie imisiwe phakathi nendiza. Lokhu kwaphakamisa isidlaliso sakhe "I-Flying Dutch Man".
URobin van Persie- U-Dutchman ondizayo
Uhambo lwakhe lwenzeke ngemuva kokuba egibele ibhola elizoshaya i-Iker Casillas bese livula i-Dutch scoring spree.
Kwakungumdlalo omuhle kakhulu wezemidlalo okwenza kube neminye yemigomo emangalisayo kakhulu emlandweni weNdebe yoMhlaba. Ukubamba ngesandla ngokuyinhloko kwebhola lezinsuku zanamuhla yilokho okwalandela ngemuva komgomo wakhe.
Ukugubha komgomo we-One-of-a-kind kubambisana ne-Boss van Gaal
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Indlela Umuntu Ahlulekile Ngayisayine
U-United angase asayine iVan Persie emuva kwe-2001 ngesikhathi uSir Alex Ferguson ethumela uJim Ryan isikhulu ukuba ambukele - kuphela ukuthi ingane ihanjiswe. "URobin wayengu-16 kuphela noma i-17 ngaleso sikhathi," kusho uFerguson.
UMengameli waseManchester United uthi umshayeli wakhe uJim uthi uRobin wayeyilenta elihle kakhulu. Kodwa wayezwa ukuthi wayengumntwana omncane iminyaka engu-16. Eqinisweni, wathola ikhadi elibomvu ngosuku uJim eza ukuyobuka enkundleni. UFergie wazisola ngokumthengi isikhathi eside ngemuva kokuba u-Arsenal athathe ithuba.
I-Robin van Persie Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts -Kungani ayegqoka i-Shirt Inombolo ye-20 ye-United
Wakhetha ukugqoka inombolo ye-20 noma i-21 lapho eqala ukuya eManchester United. Emazwi kaRobin van Persie ..."Isizathu sokuthi ngithatha lesi siketi ukuthi sonke sizoba yizintombi kulo nyaka futhi lokho kusho ukuthi yi-20th isihloko seMicrosoft United. Yingakho isizathu esiyinhloko ngathatha i-20, " wachaza ngaleso sikhathi. QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba kaBobin van Persie's Childhood Story kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona into engabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana akho noma Xhumana nathi!.